Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 02/05/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 02/05/2019
UEHRD held its second coordination meeting with Task Forces for 2019 at the meeting hall of Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement on 30 April.
Speaking at the meeting, Union Minister Dr. Win Myat Aye said he is going to make required confirmation in producers and financial policies related to the untaken tasks in the meeting. Not only Ministry but also the Red Cross provided humanitarian assistances. He added that the humanitarian assistances were also delivered under the UEHRD-Youth Volunteers Program. The tasks of UEHRD Committee and Committee for Implementation on the recommendations of the Advisory Commission on Rakhine State are the works needed to be carried out together.
The functions of ten tasks forces of the UEHRD Committee are very important for social economic development and long-term conflict free in Rakhine State, said the Union Minister acknowledging the successfully implemented works. Afterwards, members of the UEHRD Committee discussed their respective sectors.
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (UEHRD) ကော်မတီ၏ (၂/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (UEHRD) ကော်မတီ၏ (၂/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ဧပြီလ ၃၀ ရက်တွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ယခုအစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများအရ လိုအပ်သော အတည်ပြုမှုများကို ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီများပေးရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနက ဆောင်ရွက်ပေးနေသကဲ့သို့ ကြက်ခြေနီ လှုပ်ရှားမှု (Red Cross Movement) အနေဖြင့်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ UEHRD၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူငယ်အစီအစဉ်များဖြင့်လည်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများပေးအပ်ခဲ့ပါ ကြောင်း၊ UEHRD ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများသည် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရသောလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ရခိုင်ပြည်နယ် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ရေရှည်ပဋိပက္ခကင်းဝေးရေးအတွက် UEHRD ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁၀) ဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်မှုများသည် အရေးပါပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာမှာ အောင်အောင်မြင်မြင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြမှုအတွက်လည်း အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသည့် UEHRD ကော်မတီဝင်များက ကဏ္ဍအလိုက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။